Famaritana diso sy tarehin-javatra tsy hay - sary maneho paradoxa
Famaritana diso sy endrika tsy misy
Inona no hitanao?
Tarehimarika tsy hita isa
Misy zavatra mihetsiketsika any?
Famaranana misimisy kokoa
Ny pejy fanoratana dia fotoana mahafinaritra ho an'ny ankizy isaky ny vanim-potoana. Ao amin'ny tranonkalanay dia hahita fomba maro samihafa amin'ny lohahevitra samihafa ianao: Ny sary misy sary an-tsoratra diso sy tarehimarika tsy fantatra, antsoina hoe paradoxes, dia mahavariana ny ankizy tsirairay.
Famaritana diso sy tarehin-javatra tsy mety
Famaritana diso - sary an-tsaina
Miseho amin'ny endrika rehetra amin'ny fomba fijery diso ny teny hoe illusion optique.
Mety hitranga amin'ny lafiny iray izany, rehefa mahita zavatra tsy mitovy amin'ny zavatra tena izy amin'ny alalan'ny fomba manokana amin'ny fisoloan-tena.
Na ireo olon-kafa ao anatin'io modely io ihany no manaiky zavatra hafa na zavatra marina dia voasarika amin'ny fomba izay tsy ahafahany miseho any amin'ny tontolo iainana mahazatra ary ny fisian'ny atidoha.
Manana spaizo amin'ny sary an-tsokosoko. Kitiho ny rohy mankany amin'ny pejy miaraka amin'ny template misy azy:
Iza avy no andalana?
Iza amin'ireo no ambony noho ny hafa?
Iza amin'ireo faribolana ireo no lehibe kokoa
Paralika na tsy mivoatra?
Parallel na diso
Parallel na tsy?
Ny fanitsiana ny rohy dia miova amin'ny pejy misy ny template misy azy:
Faces or vase
Bars telo na efatra?
Famantarana diso - inona no hitanao?
Tsy misy tohatra
Ao amin'ireo sary etsy ambany, dia toa misy zavatra mihetsika foana, mijery akaiky! Kitiho ireo sary mba hanitarana ny sary:
Mifindra monina ireny faribolana ireny. tsy
Raha jerena amin'ny endriny mifantoka io sary io, ny fahitana ny olombelona dia mahazo ny fahatsapana ny famolavolana boribory. Mazava ho azy, tsy misy zavatra mihetsika eto amin'ity sary ity!
Indray andro, ny atidohantsika dia manao tsikombakomba amintsika amin'ny fifampikasokasoka amin'ny masontsika: ny sary famantarana ny optique dia mifototra amin'ny sary manintona ny lamina.
Kianjan'i Kanisza - mahita zavatra izay tsy ao
Na dia inoantsika aza fa mazava tsara amin'ny masontsika izany: tsy misy ny kianja eo afovoany, ny atidohantsika dia manangana ny sary mijery fomba mahazatra. Ity tranga ity dia fantatra amin'ny anarana hoe "Kianjan'i Kanisza".
Diso tanteraka ve izany?
Marina? Mino izany na tsia, mifanitsy tanteraka ny tsipika. Azonao atao ny mamaritra izany, na mifantoka amin'ny tsipika roa miavaka, dia hitanao fa mifanitsy ny andalana rehetra.
Famantarana ho an'ny olon-dehibe
Ny ankizy dia mahita zavatra tsy mitovy amin'ny ankamaroan'ny olon-dehibe ...
Zavatra tsy azo atao - triatra
Zavatra tsy azo atao - tohatra
Optical illusion - face or vase
Optical illusion - Parallel na tsy
Famantarana diso - mivantana na mivantana
Optical Illusion - Telo na efatra
Famantarana diso - inona no hitanao
Famantarana diso - manodidina
Famantarana diso - Tsia?